Global Voices teny Malagasy » Lahatsoratra Mikasika Ny Jurassic : Hadalàna Nataon’Ilay Ministra Afghana Niretaka Ahiahy Momba ny “Fahamendrehana” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Febroary 2018 6:43 GMT 1	 · Mpanoratra Ezzatullah Mehrdad Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Afganistana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika
Shahzad Gul Aryoubi, Minisitra ny Fifandraisandavitra sy ny Teknolojian-tSerasera Afghana .Sary ofisialy avy amin'ny governemanta.
Ratsy fanombohana i Shahzad Gul Aryoubi, Minisitra ny Fifandraisandavitra sy ny Teknolojian-tSerasera Afghana, disodiso tanatin'ny kabary nomaniny mialoha tamin'ny filazàny fa antitra be efa «Taonjato 1,5 tapitrisa» ny tolotra paositra ao amin'ny firenena.
Hadalàna nahatonga ny olona hametra-panontaniana momba ny fomba nahazoan'ireo mpiasam-panjakana ny toerany talohan'ilay adihevitra manerana ny tambajotra sosialy tao an-toerana.
Hoy ny Minisitry ny Fifandraisandavitra sy ny Teknolojian-tSerasera @ashrafghani  hoe “efa Taonjato 1,5 tapitrisa ny tantaran'ny paositra ao amin'ny firenena”.
Henoy ange e; tsy mamaky teny amin'ny teny Marsiana anefa izy fa amin'ny fiteny Farsi, teny ofisialy ao Afghanistàna .
Ampahany amin'ny olan'i Aryoubi ny fiteny. Amin'ny maha-mpiteny pachtou azy, toy ny kenda izy rehefa Dari, izay tsy hafa fa iray amin'ireo teny ofisialy be mpampiasa aoamin'nyu firenena, eny anivon'ireo foko tsy Pachtou. Iray amin'ireo Ministra 11 tamin'ireo 22 notendren'ny  Parlemanta Afghana ny faran'ny taona lasa teo mba hitàna toerana ambony i Aryoubi.
Nandritra ilay kabary tamin'ny 7 Janoary, betsaka ireo teny disodiso nolazainy ary nilaza  koa izy fa ny paositra ao Afghanistana dia efa “Taonjato 1,5 tapitrisa” tany aloha no nisiany, talohan'ny nisian'ny olombelona teto an-tany.
Parwiz Kawa, mpanao gazety Afghana, nanakiana ilay Minisitry vaovaon'ny serasera izay lazainy fa zara raha mahay taratasy.
Minisitra #NUG miezaka mamaky kabary amin'ny fiteny ofisialy, ary tsy vitany. Na dia efa nandalo fitsapam-pahaizana sy nohadihadian'ilay Filoha manana Doctorat aza. Mety ho teo amin'ny taona fahatelo tany amin'ny fianarana nianarako aho dia efa tsy afaka raha ratsy be toy izany ny famakiako teny.
Lal Bakht, vehivavy iray mpampiasa Twitter, naneso ilay Minisitra sy ny hafainganam-pandehan'ny Aterineto ao Afghanistana..
Nandefa imailaka efa tamin'ny taonjato 1,5 tapitrisa lasa aho, kanefa mbola tsy lasa foana ilay izy. Toy izany ny hafainganam-padehan'ny Aterineto ao Afghanistana.
Sary mahatsikaiky iray manasongadina fanaingoana maneho Dinozaoro sy ilay Minisitra no nalàza be tany amin'ny Facebook sy Twitter.
Ho valin'ny fanambaràn'ilay Minisitra, izay nilaza fa antitra be efa taonjato 1,5 tapitrisa tany aloha no nisian'ny paositra ao Afghanistana.
Taorianà fivoriana naharitra ela notanterahan'ny Filoha Ashraf Ghani sy ilay tale jeneraly Abdullah Abdullah, napetraka eo an-tanan'ny parlemanta ilay kabinetra vaovao,izay ahitàna an'i Aryoubi sy ireo namany.
Ny taona 2014 , nanangana ny National Unity Government (NUG) – Governematan'ny Fampiraisam-Pirenena – ireo mpitondra roa ireo taorian'ny fifandonan'i Ghani tamin'i Abdullah tanatin'ilay fifidianana nahamay sy nahitàna fandikan-dalàna, kanefa dia nanankorontana ny politika anatiny io ady io.
‘Tsy Ampy fanabeazana fototra’
Ny taona 2014, nanangana ny National Unity Government (NUG) – Governemanta Fampiraisam-Pirenena – ireo mpitondra roa ireo taorian'ny fifandonan'i Ghani tamin'i Abdullah tanatin'ilay fifidianana nahamay sy nahitàna fandikan-dalàna, kanefa dia nanankorontana ny politika anatiny io ady io.
Naeem Nazari, filoha mpitantana ny Tambajotran'ireo Fiarahamonina Sivily Afghàna, nanambara  toy izao tao amin'ny fahitalavitra tao an-toerana :
Malahelo aho mahita ny Mpitondra ao amin'ny Governemanta Fampiraisam-Pirenena miresaka ny fahaizana mitantana kanefa izy ireo aza manendry minisitra iray tsy ampy fanabeazana fototra.
Ao Afghanistàna, ny tahan'ny fanabeazana fototra  dia eo amin'ny 31% eo ho an'ny olon-dehibe. Ny tahan'ny fampianarana ny vehivavy 17%, raha toa ny lehilahy ka manodidina ny 45%.
Teo ambanin'ny Talibàna, notantanan'ny mpitondra zara raha nahita fianarana ny governemanta, ary iny kabarin'i Aryoubi iny no notsarain'ny mponin'ny aterineto ao an-toerana ho toy ny mariky ny tsy fandrosoana.
Ny fahamendrehana dia midika ; amin'ny fehezanteny tokana, manao hadisoana maro izy.
Azo tsara ihany ny hatezeran'izy ireo. Tanora, mponina nahita fianarana, izay mibahana ny resaka anaty Facebook, nefa matetika lavin'ny governemanta ny fanomezana asa azy ireo..
Isantaona, mamoaka  manam-pahaizana 50.000 hatramin'ny 90.000 ireo Oniversite manerana ny firenena kanefa 15.000 isantaona ihany no raisin'ny governemanta.
Misy rafitra ara-pitondrana mamàka lalina loatra ka tsy ahazoan'ireo tanora Afghàna toerana ao amin'ny fitondrana. Nanome toky i Ghani fa hametraka rafitra vaovao miorina amin'ny fangaraharàna sy ny lentan'ny tanora.
Kanefa tsy mbola nanao fanovàna firy ny Presidansa hatreto, ary mbola noharatsiany ihany ny endriny tamin'ny taona ldasa tamin'ny nanendreny an'ilay dadatoany efa fitopolo taona mahery ho Masoivohon'i Afghanistàna any Rosia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/22/114214/
 disodiso tanatin'ny : http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/32898
 napetraka eo an-tanan'ny : http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/32252-afghan-government-introduces-12-cabinet-nominees-to-parliament-for-approval
 tahan'ny fanabeazana fototra: http://www.unesco.org/new/en/kabul/education/enhancement-of-literacy-in-afghanistan-ela-program/
 nanendreny an'ilay dadatoany efa fitopolo taona mahery : https://www.nytimes.com/2017/02/27/world/asia/afghanistan-moscow-putin-ghani-kochai.html